कुकुरमा खाँदै, कारणहरू र उपचार
एक कुकुरमा खाँदै एकदम सामान्य छ, र कारण साँस र विभिन्न हृदय रोगको कारण समस्या हुन सक्छ। खाँसीको कारण निमोनिया हुन सक्छ , लोनचोपोन्युनिया, विभिन्न ब्रोंटेइटिस, जुन तीव्र र पुरानो हुन सक्छ।
यदि एक कुत्ताले लारीङ्गो-फरेन्जेन्टिटिस र लारीन्गाइटिस विकास गर्दछ, जुन प्रायः खाँटीको साथ हुन्छ, र कुकुरले यसको भूख गुमाउँछ, सुस्त हुन्छ र उसको आवाज गुमाउनु हुन्छ, लिम्फ नोड्स वृद्धि। यो कारण एडेनोभिरस संक्रमण हुन सक्छ।
खुकुरीको कारण कलर वा लामो लिङ्गको साथ फार्योक्सको मेकेनिकल निचोड हुन सक्छ। साथै, ठंडे पानी र खाना लिने क्रममा सूजनले विकास गर्दछ।
त्यसो गर्दा कि श्वसन ड्रिसेना सुरू हुन्छ, एक सूखी, पार्श्वीय आटा, कारण ब्याक्टेरिया को प्रवेशमा हुन सक्छ। त्यहाँ एक "एवेरी खाडी सिंड्रोम" हो, जब भाइरस कुत्तेको श्वसन पथमा प्रवेश गर्दछ। यसको अतिरिक्त, एक कुत्तेको खाँसीले परजीवीलाई शरीरमा उजागर गर्दा विकास गर्न सक्छ, जिसके परिणामस्वरूप ट्रेभियो-ब्रोंकाइटिस वा संक्रामक ट्राभाइटिसको विकास हो ।
एक कुकुरमा ट्राचिसाइट यसको कङ्गो र माइकोप्लिप्मा, acholeplasmas र ureaplasma को शरीर मा प्रभाव देखि छ।
एक कुत्ते मा खाएको कारण संक्रामक रोगहरु को अतिरिक्त, कारण गैर-संक्रामक हुन सक्छ, जो पोलीप, अनुपस्थ, विभिन्न ट्यूमर या विदेशी निकायहरु को कारण हो। साथै, कुत्तेले एक्टर्राच्युल सम्पीडन हुन सक्छ, जुन esophagus को फैलावट को कारण हो। खरानी आन्तरिक स्रावको ग्रंथमा वृद्धि को लक्षण हुन सक्छ, थाइरोइड ग्रंथि को सूजन।
कुकुरमा खाएको कहिले काँही कहिले काँही ट्रेकिआमा जन्मजात परिवर्तनको साथ हुन्छ, जब ट्रेचल हाइपोप्लासिया विकास हुन थाल्छ। यो बोस्टन टेरियर्स वा अंग्रेजी बुल्डलगोगको रूपमा कुत्तहरुको यस्तो प्रजातिमा निहित छ। यसको अतिरिक्त, एक कुत्तामा खाँसीले कम श्वसन पथ रोगको साथ विकास गर्न सक्छ, यो निषेधमा जान सक्छ ती तीव्र ब्रोंकाइटिस हुन सक्छ। यस अवस्थामा, लक्षण एक गीला खाँसी हो। तीव्र ब्रोंकाइटिसमा, खाँसी paroxysmal हुन्छ, तर यस समयमा कुकुर मोबाइल हो, र यस रोगमा यो प्रतिबिम्बित छैन। यस अवस्थामा, हावा ताजा हावाको बलियो सास वा लियो निलो निस्कन्छ, जुन ब्रोंकाइटिसको विकासको समयमा संचय हुन्छ।
कुत्तों मा खाँसी एलर्जी ब्रोंकाइटिस वा फेफड़ों ट्यूमर संग हुन सक्छ। यस अवस्थामा, कुत्तों मा हृदय खाँसी विकसित गर्न को लागी शुरू हुन्छ, जो दिल को विफलता संग सानो सर्कल र फुफ्मरीय edema मा स्पष्ट परिसंचरण विरूपण को कारण हुन्छ ।
एक कुत्ते मा सूजन को कम गर्न को लागि, यो प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत गर्न को लागि उनको भिटामिन ए, सी, ई को लागि आवश्यक छ, जो कुत्ते को लागि तेजी देखि ठीक गर्न को लागि संभव छ। कुखुरामा खाएको खाँसी छ? उपचार एक पशु चिकित्सक नियुक्ति गर्नु पर्छ, र उहाँलाई लागू गर्नु अघि तपाई लोक उपचार प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। जब तपाई खाएमा, तपाइँ कुत्तेले नींबू संग केही महान् देउला र मुर्ती को जरा पकाउन सक्दछन्, यो शरदले चाँडै कुत्ते बाट सुँगुर हटाउनेछ। यो भाइरस ठुलो हुनुपर्छ र कुत्तेको मुखमा एक सिरिन्जको साथ राख्नु पर्छ। खाडीको लागि उत्कृष्ट उपाय जापानीको मध्यस्थ हो, यो यो औषधीय संयंत्रमा आधारित चीनी औषधि हो। यसले गलेमा जलनलाई पूर्ण रूपमा हटाउँछ। एक कुकुरले यो औषधि प्रति 10 किग्रा कुकुरको वजनमा एक चम्मचको आठौं दिन दिन्छ। घटनामा कि कुकले 20 किलोग्राम वजन पाउँछ, तपाइँ आधा चम्मच दिन सक्नुहुन्छ।
कुकुरहरूमा कुखुरा ईचिनोसिसासँग उपचार गर्न सकिन्छ, यो औषधिीय पौधाले खाँटीको लक्षण मात्र नबढाउँदछ, तर यो हृदयको विफलतालाई सम्भव पार्न सम्भव हुन्छ जुन अक्सर ऊपरी र निलो श्वसन मार्ग को विभिन्न सूजनहरु संग विकसित हुन्छ। जब कुखुरा भाइरस र विभिन्न संक्रमणको कारण खरगोशको विकास गर्दछ, यसले हाइड्रास्टिसलाई सम्भव गराउन सम्भव छ, जसमा एक एंटीबैक्टेरियल र एंटीवायरल प्रभाव हुन्छ। यो ड्रगले प्रति 10 किलोग्राम वजन 6-7 बूँद दिन्छ, र यो औषधि कचरा छ, कुत्तेले यसलाई खानाको साथ दिनुपर्छ।
यसकारण, यो निष्कर्ष निकाल्न सक्छ कि यदि एक कुकुरले खाँसी रोगको विकास गर्दछ कि खाँसीको कारणले यो पशु चिकित्सक र यसलाई उपचार गर्नको लागी उपायहरूको जाँच गर्नु पर्छ।
महिला मा defecation समयमा रगत: कारण
मध्यवर्ती तरल पदार्थ के हो? एक शरीर को सबै भन्दा महत्वपूर्ण घटक को
महिलाहरु को लागि स्तन मसाज
कसरी घर मा रक्त देखि रक्सी ल्याउन: प्रभावकारी विधि र सिफारिसहरू
विकास र अन्य संकेतक आफ्नो आदर्श वजन कसरी गणना गर्न
तपाईं चीन मा पैसा के थाहा छ?
यो एक गाढा खरानी-खैरो कपाल रंग छ?
वर्षको बकरीमा जन्मेका बारे सबै
छाला बायोप्सी: सङ्केत गर्छ, बोध को प्रविधी, परिणाम
कहानिहरु बच्चाहरु को लागि Plyatskovskim।
"सुजुकी bandit 600": प्राविधिक विनिर्देशों, फोटो, समीक्षा
5 नोभेम्बर - खुफियाको दिन। GRU को कर्मचारीहरु लाई बधाई छ
स्नूकर: खेल को नियम
रातो पोशाक लागि मेकअप। गल्ती नगर्न?
पाठक गरेको डायरी लागि "निलो साँप" Bazhov सारांश
सर्जरी कसरी? सङ्केत गर्छ, तयारी र प्रकार। सञ्चालन कसरी?
कति बियर मा पीपीएम बोतल 0.5?